Uber ကနေ ကားဌားရင် ဖုန်းဆက်စရာမလိုအောင် In-App Chat ထည့်သွင်းပေးမည်
Uber ကနေ ကားဌားရင် ဖုန်းဆက်စရာမလိုအောင် In-app Chat စနစ်ကို မကြာခင် ထည့်သွင်းပေးတော့မယ်
14 Aug 2017 . 1:47 PM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလတုန်းက စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ Uber က စီးနင်းသူတွေအဆင်ပြေဖို့ အတွက် ကားဌားတဲ့အချိန်မှာ ဒရိုင်ဘာကို ဖုန်းခေါ်ဆိုမယ့်အစား Application ထဲကနေပဲ Viber ၊ Messenger အသုံးပြုသလို စာပို့ပြီး လှမ်းဆက်သွယ်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့ ဒီလို In-app Chat စနစ်ကိုထည့်သွင်းပေးဖို့ အကြံရသလဲဆိုရင် Uber ကုမ္ပဏီကပြောကြားချက်အရတော့ ခရီးစဉ်တစ်ခုစတင်ပြီဆိုတာနဲ့ ဒရိုင်ဘာက ကားဌားတဲ့သူဆီကို လာခေါ်ရတာနဲ့ အစပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် အရင်ဆုံး ဒရိုင်ဘာက ဖုန်းခေါ်တာကို စောင့်ရမလား၊ ကိုယ်က အရင်ဆက်သွယ်ရမလားဆိုပြီး တွေဝေတာမျိုးကို လျော့ချနိုင်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ Uber App ကနေ ကားဌားတဲ့အချိန်မှာ အရင်ဆုံး လာခေါ်မယ့်နေရာကို ရွေးပြီး ကားခေါ်လို့ရတဲ့အချိန်မှာ ဒရိုင်ဘာကို ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းခေါ်တာ၊ SMS ပို့တာကို ပြုလုပ်နိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒရိုင်ဘာတွေအကုန်လုံးက ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ချက်ခြင်းမပြုလုပ်တဲ့အခါ၊ တယ်လီဖုန်းလိုင်းကျနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ ကိုယ်ခေါ်ထားတဲ့ကားနဲ့ ဆက်သွယ်ရတာ အခက်အခဲဖြစ်တာကို လူတိုင်းကြုံဖူးမှာပါ။ အခုလို In-app Chat ကိုထည့်သွင်းပေးလိုက်တာက ဒီလိုအခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်လို့ Uber က ယုံကြည်ထားပါတယ်။
အခုလို ဖုန်းခေါ်စရာ၊ SMS ပို့စရာမလိုတော့တဲ့အတွက် SIM Card မရှိပဲ Wifi Network ပဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Tablet လို Mobile Device တွေမှာပါ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပိုင်း Uber App ကနေ Taxi ခေါ်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုလာခေါ်မယ့် ဒရိုင်ဘာကို ယခင်လိုပဲ Contact ကို နှိပ်ပြီး Chat ကနေ စာပို့ပြီး ဘယ်နေရာကိုလာခေါ်စေချင်တယ်၊ ကိုယ်ကဘာဝတ်ထားတယ် ဆိုတာကို ပြောလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရင်လိုမျိုး ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ Option က Application ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာ ဆက်လက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Uber ကပြောကြားချက်အရတော့ ထို In-app Chat စနစ်မှာ ပို့ထားတဲ့စာတွေကို ဒရိုင်ဘာရော၊ ကားဌားတဲ့သူတွေကိုဖတ်ပြီးပြီလား၊ မဖတ်ရသေးဘူးလားဆိုတာကိုပါ သိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကားမောင်းတာကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေအောင် ပို့ထားတဲ့စာကို အသံထွက်ပါဖတ်ပြဦးမှာပါ။ ဒီစနစ်ကတော့ မြန်မာလိုပို့တဲ့စာတွေအတွက်အဆင်ပြေဦးမှာမဟုတ်လောက်သေးဘူးထင်ပါတယ်။
In-app chat ပါဝင်လာမယ့် Uber App Version အသစ်ကို မကြာခင် ရက်သတ္တပတ်တွေမှာ ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ သင့်ဖုန်းမှာ Uber သွင်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ Update ရတာနဲ့ ပြုလုပ်ဖို့ အကြုံပြုလိုက်ပါတယ်။ Akhayar ပရိသတ်ကြီးရော Uber ကားဒရိုင်ဘာကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ဆက်သွယ်ရတာကို သဘောကျလား၊ အခုလို In-app Chat ကနေပဲ စာပို့ပြီး ဆက်သွယ်ရတာက ပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါသလား?
Reference : Android Authority
မွနျမာနိုငျငံမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဧပွီလတုနျးက စတငျဝငျရောကျလာခဲ့တဲ့ Uber က စီးနငျးသူတှအေဆငျပွဖေို့ အတှကျ ကားဌားတဲ့အခြိနျမှာ ဒရိုငျဘာကို ဖုနျးချေါဆိုမယျ့အစား Application ထဲကနပေဲ Viber ၊ Messenger အသုံးပွုသလို စာပို့ပွီး လှမျးဆကျသှယျနိုငျတော့မှာဖွဈပါတယျ။
ဘာလို့ ဒီလို In-app Chat စနဈကိုထညျ့သှငျးပေးဖို့ အကွံရသလဲဆိုရငျ Uber ကုမ်ပဏီကပွောကွားခကျြအရတော့ ခရီးစဉျတဈခုစတငျပွီဆိုတာနဲ့ ဒရိုငျဘာက ကားဌားတဲ့သူဆီကို လာချေါရတာနဲ့ အစပွုတဲ့အတှကျကွောငျ့ အရငျဆုံး ဒရိုငျဘာက ဖုနျးချေါတာကို စောငျ့ရမလား… ကိုယျက အရငျဆကျသှယျရမလားဆိုပွီး တှဝေတောမြိုးကို လြော့ခနြိုငျသှားဖို့ ရညျရှယျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာ Uber App ကနေ ကားဌားတဲ့အခြိနျမှာ အရငျဆုံး လာချေါမယျ့နရောကို ရှေးပွီး ကားချေါလို့ရတဲ့အခြိနျမှာ ဒရိုငျဘာကို ဆကျသှယျဖို့ ဖုနျးချေါတာ၊ SMS ပို့တာကို ပွုလုပျနိုငျသေးတာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒရိုငျဘာတှအေကုနျလုံးက ဖုနျးချေါဆိုမှုကို ခကျြခွငျးမပွုလုပျတဲ့အခါ၊ တယျလီဖုနျးလိုငျးကနြတေဲ့အခြိနျမြိုးတှမှော ကိုယျချေါထားတဲ့ကားနဲ့ ဆကျသှယျရတာ အခကျအခဲဖွဈတာကို လူတိုငျးကွုံဖူးမှာပါ။ အခုလို In-app Chat ကိုထညျ့သှငျးပေးလိုကျတာက ဒီလိုအခကျအခဲတှကေို ဖွရှေငျးပေးနိုငျမယျလို့ Uber က ယုံကွညျထားပါတယျ။
အခုလို ဖုနျးချေါစရာ၊ SMS ပို့စရာမလိုတော့တဲ့အတှကျ SIM Card မရှိပဲ Wifi Network ပဲအသုံးပွုနိုငျတဲ့ Tablet လို Mobile Device တှမှောပါ အသုံးပွုနိုငျပါလိမျ့မယျ။
နောကျပိုငျး Uber App ကနေ Taxi ချေါပွီးတဲ့အခါ ကိုယျ့ကိုလာချေါမယျ့ ဒရိုငျဘာကို ယခငျလိုပဲ Contact ကို နှိပျပွီး Chat ကနေ စာပို့ပွီး ဘယျနရောကိုလာချေါစခေငျြတယျ၊ ကိုယျကဘာဝတျထားတယျ ဆိုတာကို ပွောလိုကျရုံပဲဖွဈပါတယျ။ အရငျလိုမြိုး ဖုနျးချေါဆိုပွီး ဆကျသှယျခငျြတယျဆိုရငျလညျး ဖုနျးချေါဆိုနိုငျတဲ့ Option က Application ရဲ့ ညာဘကျအပျေါထောငျ့မှာ ဆကျလကျရှိနဦေးမှာဖွဈပါတယျ။
Uber ကပွောကွားခကျြအရတော့ ထို In-app Chat စနဈမှာ ပို့ထားတဲ့စာတှကေို ဒရိုငျဘာရော၊ ကားဌားတဲ့သူတှကေိုဖတျပွီးပွီလား၊ မဖတျရသေးဘူးလားဆိုတာကိုပါ သိနိုငျမှာဖွဈပွီး ကားမောငျးတာကို အနှောငျ့အယှကျမဖွဈစအေောငျ ပို့ထားတဲ့စာကို အသံထှကျပါဖတျပွဦးမှာပါ။ ဒီစနဈကတော့ မွနျမာလိုပို့တဲ့စာတှအေတှကျအဆငျပွဦေးမှာမဟုတျလောကျသေးဘူးထငျပါတယျ။
In-app chat ပါဝငျလာမယျ့ Uber App Version အသဈကို မကွာခငျ ရကျသတ်တပတျတှမှော ထုတျပေးသှားမှာဖွဈပွီး တကယျလို့ သငျ့ဖုနျးမှာ Uber သှငျးထားတယျဆိုရငျတော့ Update ရတာနဲ့ ပွုလုပျဖို့ အကွုံပွုလိုကျပါတယျ။ Akhayar ပရိသတျကွီးရော Uber ကားဒရိုငျဘာကို ဖုနျးချေါပွီး ဆကျသှယျရတာကို သဘောကလြား၊ အခုလို In-app Chat ကနပေဲ စာပို့ပွီး ဆကျသှယျရတာက ပိုအဆငျပွမေယျထငျပါသလား?